နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2015 ၏စာမျက်နှာ2NAB သတင်းများ | 41 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
လစဉ်မော်ကွန်း: နိုဝင်ဘာလ 2015
အား NBC Universal တည်နေရာ: Universal စီးတီး, CA အမေရိကန်ထိုကဲ့သို့သော Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ်, နောက်ဆုံးဖြတ်သို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် ... ကဲ့သို့သောအခြားဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို tool ကိုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖြစ်ရမည်။ more >>
လူမှုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ / Editor ကို (Preditor)
moviepilot တည်နေရာ: ဗီဒီယိုကို formats ၏ Serial ထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ဗင်းနစ်, CA အမေရိကန်။ ကြိုတင်ဗီဒီယိုထဲမှာအသိပညာနှင့် / သို့မဟုတ် Short-ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုရှိသည်။ Serial ပေါ်ရှိအခြားအယ်ဒီတာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ် ... နောက်ထပ် >>
အမေရိကတည်နေရာကင်ဆာကုသမှုစင်တာများ: Boca Raton FL အမေရိကန်အဆိုပါဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအထူးကုအားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကို Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းတွေကိုဖြစ်ပါတယ် ... ။ more >>
Los Angeles - Zylight, ဆန်းသစ် LED မီးအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ယနေ့ယင်း၏ Newz ကျစ်လစ်သိပ်သည်း On-ကင်မရာအလင်းယခုရေကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကြေညာခဲ့သည်။ ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းနှင့်အခြားပြေး-and သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအခြေအနေများများအတွက်ဒီဇိုင်း, အ Newz ထုံးစံကျီတံခါးနှင့် shooters အလွယ်တကူအလင်း၏အမြင့်နှင့်ထောင့်ကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ထူးခြားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံပီသသောလက်ရုံးတော်ပါရှိပါတယ်။ Plus အား, ထို Newz ဖြစ်ပါတယ် ...
LONGMONT, CO, နိုဝငျဘာ 30, 2015 - DPA မိုက်ခရိုဖုန်းလူကြိုက်များအတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, မတူညီတေးသီချင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးအနုပညာရှင်တွေတိုးအသိပေးစာယူပြီးနေကြသည်။ Olivia Chaney, Aoife O'Donovan နှင့် SHEL အဖြစ်လူသိများညီအစ်မတွေရဲ့တီးဝိုင်း - နောက်ဆုံးပေါ် DPA နိူးများထဲတွင်အများအပြားအမျိုးသမီးရိုးရာအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြသည်။ တိုက်ရိုက်လွှဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ဤအနုပညာရှင်တွေအားလုံး၏သဘာဝအသံတစ်ခုလေးမွတျကိုမျှဝေ ...
trilogy ပာ, အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မာစတာရည်ညွှန်းမီးစက်တစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ဂယ်ရီလူးဝစ်၏ချိန်းနှင့်အတူအရောင်းအသင်း၏ထပ်မံချဲ့ထွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။ Lewis ကအများဆုံးမကြာသေးမီက Riedel ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအကြီးတန်းရောင်းအားရာထူးအတွက်ထုတ်လွှင့်အတွေ့အကြုံ 30 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုရှိပါတယ်။ Lewis က UK မှာကုန်ပစ္စည်းအရောင်း Manager ကယောဟနျသ Sparrow နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ...
အဆိုပါရီးရဲလ်သတင်းကွန်ယက်အဝေးမှဧည့်အင်တာဗျူးများသည် NewTek TalkShow အသုံးပြု
San Antonio, TX - နိုဝင်ဘာလ 30, 2015 - အဆိုပါရီးရဲလ်သတင်းကွန်ရက် (TRNN), Baltimore အတွက်အွန်လိုင်းမှသတင်းကွန်ရက်မကြာသေးမီကအရည်အသွေးမြင့်မားဝေးလံသောဧည့်သည်အင်တာဗျူးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ Live Show မြှင့်တင်ရန် NewTek ™ထံမှ TalkShow ™ဗီဒီယိုကိုတောင်းဆိုစနစ်အားတပ်ဖြန့်။ မည်သည့်အစိုးရသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ကြော်ငြာဒေါ်လာကိုလက်မခံပါဘူးတဲ့လုံးဝအလှူရှင်-ရန်ပုံငွေသတင်းဘူတာရုံအဖြစ်, TRNN အကြီးအကျယ်ယင်း၏မစ်ရှင်အောင်မြင်ရန်နည်းပညာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကွန်ယက်မှကြီးပြင်းအဖြစ် ...
Garrett ဘရောင်းကသူ့ရွှေ့ Image ကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူတို့နှင့်အတူအတွက် pack မှာနှင့် M-1 မက်စ်နှင့်အတူတက်နှင့်တွေ့ဆုံ
ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် Garrett ဘရောင်းကသူ့ရွှေ့ Image ကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူတို့နှင့်အတူအတွက် pack မှာနှင့် M-1 မက် 1 အတူတက်နှင့်တွေ့ဆုံသည် Tiffen နိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းကြေညာချက်) မက်စ် Zaher (လက်ဝဲ) က Natalia Mentkowska အားဖြင့် Camerimage -photo မှာ Steadicam တီထွင်သူ Garrett ဘရောင်းနှင့်တွေ့ဆုံ (ဓါတ်ပုံအသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်ကျေးဇူးပြုပြီး !) 2x 300 dpi ပုံရိပ်တွေထောက်ပံ့, ဒီလွှတ်ပေးရန်၏အဆုံးမှာစာတန်းထိုးများ - ဓါတ်ပုံ ကျေးဇူးပြု. အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည် ...
2 ၏စာမျက်နှာ 41«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»